Siyaabaha lacag looga sameeyo guriga iyo internetka | Barashada Jarmalka, Barashada Jarmalka
Siyaabaha lacag looga sameeyo guriga iyo internetka
Home » Dhaqanka guud » Siyaabaha lacag looga sameeyo guriga iyo internetka
Siyaabaha 1 Loogu Sameeyo Lacag
2 lacag ka bixinta internetka
3 Fursado Shaqo Dheeraad ah oo Guriga ah
Siyaabaha loo Sameeyo Lacag
Kuwa jecel inay shaqeeyaan oo raba inay wax ku kordhiyaan noloshooda iyagoo qabanaya shaqooyin yaryar, waxaan dooneynaa inaan ka hadalno goob ay ku jiraan daraasiin macluumaad iyo daraasiin fikrado ganacsi oo dheeri ah. Dogrupara.com waa degel aad loo jecel yahay maanta siyaabaha lacagta loo dhiso waxay siisaa macluumaad aad u fiican. Websaydhka lacagta saxda ah wuxuu ku socdaa wadada dakhliga sare samee lacag si ay gacan uga geystaan.
Macluumaadka: Qiimaha Buuxinta Ilkaha
Haddii shaqadaada mushaaradu aysan mar dambe ku qancin, safar cusub u dhaqaaq. U adeegso macluumaadka aan siino booqdeyaashayada qiimaha badan oo waqtigaaga hartay u beddelo daqli. Malaha yaa og, dhamaadka safarkan waxaad kasban doontaa wax ka badan mushaharkaaga. Ganacsigan dheeriga ah ee aad bilowdeen sannadihii wuxuu isu rogi doonaa fursad oo waxaad noqon doontaa sumcad iyo magac ku habboon goobtaada. Lacagta saxda ah Koox ahaan, waxaan ku fidinay fursadaha ganacsi ee dheeriga ah ee aan iskugu keennay taageerayaasheena qiimaha leh aag aad u ballaaran. Magaca lacag sameynta, waxaad ka heli kartaa habab badan, habab iyo fursado min sahlan, dakhli maalmeed ilaa ganacsi muddo dheer ah.
lacag ka sameyso internetka
Waqtiyada adagi waxay u baahan yihiin shaqo dheeri ah. Haddii aad caajis ku tahay awoodda wax iibsiga ee maalinlaha ah, waa inaad ballaarisaa aqoontaada haddii aad ku dhegan tahay isla dakhli sannado isku mid ah. Dogrupara.com wuxuu ku siinayaa fursado badan. Adoo galaya Dogrupara.com lacag ka sameyso internetka Ku raac safarkaaga guusha ee shaqsiyeed fursado. Dabcan, safarkan kuma koobnaan doono guusha shaqsiyeed.
Xaqiiqdii waxay noqon doontaa safar dhaqaale, iyo laga yaabee dhamaadka safarkan lacag ka sameyso internetka Waxaad awoodi doontaa inaad gaadho toban jeer dakhligaaga haatan jira. Waxaad ku bilaabi kartaa tas-hiilaadka aan ku siino. Maalin kasta waad booqan kartaa dogrupara.com si aad uga faa’ideysato macluumaadka cusub iyo waxa ku jira. Kaydkeenna hababka iyo qaababka gaarka ah ayaa si isdaba joog ah loogu ballaarin doonaa si loo helo dakhli badan.
MUUQAALKAN: WAA MAXAY XIRFADAHA
Fursado Dheeraad ah oo Shaqada Guriga ah
warbixin: Qiimaha iibka 2020
Dogrupara.com, oo isu keento waxyaabo badan oo guriga lagu qaban karo, gaar ahaan dumarka, ayaa laga yaabaa inay hesho shaqo aad ku qaban karto iyadoo maskaxdaada ku habboon. Evde shaqeeya iyo sare ama hoose shaqo dheeraad ah gurigaWaxa kale oo aad ku biirin kartaa miisaaniyadda qoyskaaga adigoo qabanaya shaqooyin yaryar.
Haddii aad eegto oo keliya waxa dadka hodanka ahi hadda leeyihiin, waxaad u maleyn doontaa inay halkaas si fudud ku yimaadeen. Indhahaada ku ballaariso maxaa yeelay qaar badan oo ka mid ah dadka hodanka ah waxay si adag ugu dagaallameen inay halkaas gaaraan. Wuxuu shaqeeyay xitaa saacadihii aad seexatay, dadaal ayuu ku bixiyay. Xullo lacagta saxda ah bilawga saxda ah. Ka faa'iidayso qaababka gaarka ah ee aan ku deeqno. Fursado dheeraad ah oo shaqo oo guriga ahlacag ku kasbato shaqada guriga, shaqada guriga lagu qaban karo, Shirkadaha ka shaqeeya guryaha iyo mowduucyo badan oo dheeri ah oo ku saabsan dogrupara.com.
Halkan guji si aad u aado goobta: Lacag hel
Sida Loo Helo Shaqo Dalka Jarmalka Sideen shaqo uga helo Jarmalka?
Tixgelinnada Caafimaadka Indhaha
CUDURKA CUDURKA EE DHALMADA
Tusaale: Elif Demirci
FADLAN GALAYAASHA - 0 COMMENTS
Ma jiraan wax faallooyin ah.
Laysanka darawalka iyo malaha